Ugaas C/raxmaan Xaaji Xuseen Ibrahim, Ugaaska Beesha Cabdalle (Surre-Dir) oo ka cabanaya faragelin xubnaha beeshiisa lagu sameeyey – idalenews.com
Ugaas C/raxmaan Xaaji Xuseen Ibrahim, Ugaaska Beesha Cabdalle (Surre-Dir) oo ka cabanaya faragelin xubnaha beeshiisa lagu sameeyey
Qoraal uu soo gaarsiiyey mid ka mid ah Ugaasyada beelaha Direed Ugaas C/raxmaan Xaji Xuseen Ibrahim oo la soo gaarsiiyey Xafiiska Warqabadka IdaleNews Muqdisho ayaa ka digey in faragelinta lagu haayo xubnaha beesha, waxuuna ku yiri cabashadiisa oo qoraal ah sidaan:
Ujeedo: Faragelin Xuquuqdayda Soo xulida xildhibaanada Baarlamaanka
Anigoo ah Ugaas C/raxmaan Xaaji Xuseen Ibrahim, Ugaaska Beesha Cabdalle (Surre-Dir) kana mid ah 135ka oday dhaqameed ee soo xulay ergadii ansixisay dastuurka, waxaan halkaan ku soo gudbinayaa Cabashadan:
1. Markii aan u geeyey guddiga farsamada xubnaha xildhibaanada beesha aan ugaaska u ahay waxay ii sheegeen in xubin ka mid ah xildhibaanada uu qoray nin sheeganaya suldaanimo, markii aan waydiiyay sababta waxay ii sheegeen in guddiga khilaafaadku ay arintaa soo qoreen.
2. Guddiga farsamada ninka ay suldaanka ku sheegeen wax jiro ma aha.
3. Go’aanka la sheegay inuu ka yimid guddiga khilaafaatka wuxuu ka soo horjeedaa nidaamka lagu heshiiyey in lagu soo xulayo xildhibaanada, oo ah in 135ta duub ee soomaaliyeed ay soo xulaan Xildhibaanada, beesheydana anigaa ugu jiro.
4. Gudiga farsamada iyaga ayaa si sharci darro ah oo ula kac ah u sameeyey arintaan waxayna meel ka dhac ku tahay xushmada iyo qadarinta ay leeyihiin duubabka dhaqanka soomaaliyeed.
Sidaas darteed aniga iyo beeshaydaba ma aqbalayno in faragelin lagu sameeyo qofka aan u xulanayno inuu beesha u matalo baarlamaanka soomaaliyeed.
Sidaa si la mid ah waxaan uga digaynaa guddiga farsamada inay dusha u ridan doonaan wixii cawaaqib xumo ah ee ka yimaado arintaan xaq darrada ah.
Ugaas C/raxmaan Xaaji Xuseen Ibrahim
Qeylo dhaan ka soo yeereysa Beelaha Biyamaal & Xawaadle ee sida loo maamuley xubnaha beeshooda (Dhageyso)
Farmaajo oo Muqdisho gaarey iyo Banaanbax balaaran oo taageero ahna lagu soo dhoweeyey